“Ma aqaan waxa ay ku qaadato ciyaaryahanka Barcelona in uu sameeyo si kulanka looga saaro!” – Gool FM
“Ma aqaan waxa ay ku qaadato ciyaaryahanka Barcelona in uu sameeyo si kulanka looga saaro!”
Kaafi April 6, 2016
(Catalonia) 06 Abriil 2016. Luis Suarez waxa uu ku xejiyey Barcelona Champions League kaddib markii uu dhaliyey goolashiisii 44—aad iyo 45-aad iyadda oo uu Fernando Torres uu shabaqa soo taabtay deedna qaatay kaarka cas kulankii cajiib ka ahaa ee Camp Nou ka dhacay.
Torres waxa uu ka baxay ciyaarta daqiiqaddii 35-aad kaddib markii uu kaar labaad ku galay diiwaanka dhex dhexaadiyihii dheesha waxaana helay goolasha natiijada dhinaca kale u rogay Suarez laakiin xiddiga reer Uruguay qudhiisa in uu kaarka cas qaato ayey ahayd qeybtii hore maadama uu laad ku dhuftay Juanfran balse garsoore Felix Brych ma arag.
Suarez waxa uu ahaa nin ujeedo damacsan habeenka oo dhan, isaga oo isku dayey in uu sare u qaado Barca kaddib fashilkii ay kala kulmeen El Classico.
Balse laba jeer ayuu madaxa booday. Kaddib laadki uu qeybtii hore ku dhuftay Juanfran ee aan lagu ciqaabin waxa uu hadana gacantiisa wajiga uga dhuftay Luis qeybtii dambe laakiin aad ayuu u nasiib badnaa hadana lama ciqaabin.
Rio Ferdinand, oo la hadlaya BT Sport, wax ka shaki ah kama uusan qabin in Suarez uu mudnaa dheesha oo laga saaro, waxa uu yiri: “Xadka ayuu ka baxay”.
Mar labadii dhacdo ee Suarez wax laga weydiiyey Diego Simeone waxa uu si caro leh ugu jawaabay: “Laba dhacdo wey ka badnaayeen. Laakiin waxa ay ila tahay runtii ma sheeki karo. Lug labaad ayaan leenahay waxaana isku dayi doonaa in aan gaarno afar dhamaadka.
‘‘Wey yaqaanaan sida ay u isticmaalaan marka ay nin dheeri yihiin anaga qeybtii dambe waxaan ku caburnay dhinaceena laakiin aad ayan ugu faraxsanahay ciyaaryahanadeyda.”
Daafaca Atletico Madrid Filipe Luis isaga ayaa ka yaab badnaa tababarehiisa, waxa uuna yiri: “Ma aqaan waxa ay ku qaadato in uu sameeyo ciyaaryahanka Barcelona si kulanka looga saaro. Waa la bad baadiyaa taasna waa xanuun.”
Luis Enrique mar la weydiiyey kaarkii casaa ee kulanka looga saaray Fernando Torres waxa uu yiri: “Waxaan arkay laba qalad oo Torres ah waana sida ay jamaahiirta Barcelona wada arkeen, iyo laba kaar oo huruudi ah oo cad.”
HOR DHAC: Wolfsburg V Real Madrid (Zidane oo doonaya inuu kusii joogo jidka guulaha!)
DAAWO: PSG oo €193m ku dooneysa Neymar!